IETT nadiif ah, ololaha safarka farxadda leh | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulBas ka nadiifsan IETT, ololaha socdaalka ee faraxsan
25 / 04 / 2017 34 Istanbul, IETT, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Baska nadiifka ah ee IETT, ololaha safarka ee farxad leh: Booqasho ka timid IETT ilaa Ilkayiyaanka Dugsiga hoose waxay diyaarinayaan slogans si ay u nadiifiyaan una isticmaalaan basaska.
IETT Kaaliyaha Agaasimaha Guud Hasan Özçelik ayaa booqday ardayda Iskuulka Hoose ee Icadiye oo ka dhigtay tabarucidda isticmaalka nadiifka ah ee gaadiidka dadweynaha. 23 Abaarta Qaranka ee Qaranka iyo Maalinta Carruurta ayaa sidoo kale lagu dabaaldegay. Hasan Özcelelik wuxuu sharaxay saamiga isticmaalka gaadiidka dadweynaha deegaanka si looga hortago hawada wasakheynta. Diyaarinta ardayda; Gaadiidka lagu qurxiyo sida shuftada nadiifta ah, safar farxad leh iyo xajin Gaadiid baabuur nadiif ah, ha ku dhaawacin caafimaadkaaga 'ayaa lagu soo bandhigay deyrka dugsiga.
IETT Kaaliyaha Agaasimaha Guud Hasan Özçelik ayaa booqday ardayda Iskuulka Hoose ee Icadiye oo ka dhigtay tabarucidda isticmaalka nadiifka ah ee gaadiidka dadweynaha. IETT Agaasimaha Guud Arif Emecen'i Dr. Hasan Özçelik ayaa uga mahad celiyay ardayda inay u nugul yihiin dhaqanka gaadiidka dadweynaha. Gaadiidka Nostalgic ee Tosun iyo Qeybta Sayniska ayaa loo keenay garoonka deyrta, oo leh qalab lagu diyaarinayo carruurta.
23 Abaalmarinta Qaranka ee Abriil iyo Maalinta Carruurta ayaa lagu dabaaldegay xafladdii, ardaydu waxay diyaariyeen iskutallaabtooda gaariga ah ee baabuurta ku qaatay waqti wanaagsan. IETT Kaaliyaha Agaasimaha Guud Hasan Özçelik, oo ah hadalkiisa carruurta, isticmaalka gaadiidka dadwaynaha isaga oo ka hortagaya wasaqeynta hawada ayaa u sheegay waxqabadka jawiga deegaanka.
Iyadoo la tixgelinayo in IETT ay muhiimad weyn u leedahay nadiifinta baabuurta. Hasan Özçelik ayaa sheegay, in takhaliti I taabtay dareenka caruurteena. Farriintooda nadiifinta iyo ilaalinta baabuurta waa mid aad u muhiim ah oo aad u qiimo badan. Sida IETT, waxaan marti-galinaynaa 4,2 dadkeena baabuurta maalin kasta iyo dhamaadka maalinta, dhammaan baabuurta nadiifinta ah. Waxaanu muhiimad weyn u leenahay horumarka caado ee isticmaalka gaadiidka dadweynaha laga bilaabo carruurnimada. Maanta waxaan arkayaa in; Carruurteenu waxay ka warqabaan dhammaan kuwan iyo tan nadiifka ah ee baabuurta si fiican u joogta waxay ku xiran karaan farxadda safarka. Waxay farriin u diraan odayaasha. Waan u hambalyeynayaa ".
Gaadiidka dadweynaha ee adduunka caafimaad qaba
Wuxuu sheegay in gaadiidka dadwaynaha loo isticmaali doono adduun caafimaad qaba. Hasan Özçelik wuxuu sii waday ereyadiisii ​​sida soo socota: de Waxaan sidoo kale qaadannaa hawlaha kormeerka iyo maamulka si loo bixiyo adeegga gaadiidka dadweynaha qiimaha ugu macquulsan ee Istanbul. Waxaan kuu diyaarineynaa kaararka dhimista adiga, ardaydeena qaaliga ah, waxaanan ku dadaalnaa inaan ka faa'iideysano adeegga gaadiidka dadweynaha si dhaqaale ahaan. Si loo wanaajiyo tayada adeegyadan oo idil, Duqa Magaalada ee Istanbul Metropolitan; Waxaan si adag uga shaqaynaynaa hoggaanka Kadir Topbas. Nadaafadda iyo dayactirka gaadiidkeena ee tayada adeegga gaadiidka dadweynaha ee aan kuu siino, qoysaska Istanbul, waa dabcan mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan. "
Gawaarida IETT waxaa la nadiifiyaa ilaa 04.00 habeenkii
IETT, oo goostay inay bixiso adeegga gaadiidka nadiifka ah, raaxada leh ee amniga bulshada u qaabilsan dadka asalkiisu yahay ugu weyn, wuxuu dhammeeyaa hawlaha nadiifinta gudaha iyo dibadda ee lagu sameeyey baabuurta ugu dambeeya subax kasta oo ku yaal 04.00 oo baabuurta diyaar u ah adeega subixii.
Xalka nadiifinta isbedelka cimilada IETT
Socdaal nadiif ah oo nadiif ah leh SAMULAŞ baabuurta
IETT waxay taageertaa Baska iyo Waxbarashada Afrika
Khadka Baska Gaarka ah ee IETT ilaa Ramadan
Ma dooneyno baska cagaaran ee ku yaala magaalada Bursa
Ololaha Vanda Pink Bus wuxuu ku dhamaanayaa
IETT ayaa dammaanad qaadaya safar aan sax ahayn oo been ah
Ololaha Saxeexa ee Tareenka ka soo jeeda Efeler
Golaha Magaalada Tarsus ee Saxiixa Ololaha Tareenada
Ololaha Ramadaanka ee Rakaabka ee ka socda TCDD